निर्मला पन्त हत्या प्रकरणः डेढ वर्षमा फेरिए पाँच अनुसन्धान अधिकृत- नतिजा…? – Nepal Japan
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणः डेढ वर्षमा फेरिए पाँच अनुसन्धान अधिकृत- नतिजा…?
नेपाल जापान १६ माघ १२:३६
कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–२ का १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्या भएको डढ वर्षको अवधिमा पाँच अनुसन्धान अधिकृत खटिए पनि नतिजा शून्यकै स्थितिमा छ । ठूलो राजीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको मुद्दा बनेको यो प्रकरणमा सम्बन्धित निकायलाई सोध्यो भने गहनरुपमा अनुसन्धान भैरहेको जवाफ दिने गरेको छ र भैरहेको पनि यही हो ।
तर, प्रश्न के हो भने किन अहिलेसम्म पन्त हत्याको वास्तविकता र अपराधी पत्ता लगाउन समस्या भयो ? नेपाल प्रहरीले गम्भीरभन्दा गम्भीर प्रकृतिका घटनाका दोषीलाई २४ घण्टाभित्र पक्राउ गरेको सुनौलो क्षणको स्मरण गर्नेहरु पन्त प्रकरणमा आएर घोत्लिन बाध्य हुन्छन् । अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षको सचिवालयबाट टोली अनुसन्धानमा खटिरहेका छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट उक्त घटनाको अनुसन्धान अधिकृत रहने प्रहरी नायब उपरीक्षक छोटो समयमै धेरै परिर्वतन हुने क्रम देखिएको छ ।
शुरुआतको समयमा अनुसन्धान अधिकृतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक ९हाल निलम्बित० एकीन्द्र खड्का खटिनुभएको थियो । निर्मलालाई न्याय माग गर्दै आन्दोलन चर्किएपछि अनुसन्धान अधिकृत उहाँसहित सात प्रहरी निलम्बितमा पर्नुभएको थियो । गृहमन्त्रालयले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट र तत्कालीन वडा प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टलाई घटनाको केही महिनापछि सेवाबाटै बर्खास्त गरिदिएको थियो ।